DHAGEYSO: Dastuurku Muxuu ka qabaa burburtinta Jardiinooyinka G/Yariisow uu ku dhawaaqay
08 September, 2018 in Wararka by BANA Mogdishu Office
Guddoomiyaha gobolka Banaadir C/raxmaan Cumar Cusmaan (Eng Yariisow) ayaa wuxuu sheegay inay wadaan dadaaladii ugu dambeeyay ee gacanta dowladda loogu soo celin lahaa Jardiinooyinka iyo goobaha danta guud.
Guddoomiyaha gobolka Banaadir ayaa Saddexdii July ee sanadkan go’aan ku soo saaray in dib loogala noqday, isla markaana lagu baabi’iyey dhammaan heshiisyadii lagu bixiyey dhulka Jardiinooyinka, go’aan kaas wuxuu ku ekaa bilawgii bishii August ee sanadkan, balse weli ma aanu dhaqan gelin.
Haddaba Gudoomiye Yariisow Waxaa uu shaaciyay in dowladda Dhexe hoose ee Muqdisho ay xoog kusoo celin doonto Jardiinooyinka, dastuurka Maxuu ka qabaa hadalka Gudoomiyaha?.
Warbixintaan waxaa noo diyaariyay Faysal Cabdullaahi Maxamuud.
Xigasho Idaacada Risaala
Puntland oo xirtay Waxgarad iyo Culimo Gaalkacyo uga dhawaaqay in ay ku dhaqmayaan Shareecada Islaamka
Mareykanka oo ku dhawaaqay in uu kordhinayo weerarrada ka dhanka ah Al-shabaab
Dhageyso: S. Fartaag "Doorashada Jubbaland maloo faragelin doono sidii Koonfur Galbeed, mana yeeleyno"!
Maamulka Galmudug oo ku dhawaaqay Shir deg deg ah
DHAGEYSO: Gobolka Banaadir oo ku fashilmay wax ka qabashada dhibaatada Wadooyinka
DEG DEG:Dhageyso: Gudoomiyaha Degmada Buurhakaba oo is casilay kadib faragalin
DHAGEYSO: Fashil amni iyo mid Siyaasadeed oo ka taagan gobolka Banaadir